Gatiiwwan dhimmamaa dirree qindoomaa keessatti galfaman ykn tarree keessatti filaman gabatee kuusaa deetaa keessaatti olkaa'aman unkaa keessatti fayyadu. Gatiiwwan gabatee biroo keessatti olkaa'un hin danda'amuu hubadhu. Yoo gatiiwwan kuusaa deetaa keessatti ol hin kaa'amin, unkaa keessatti qofa olkaa'ama. Kun keessattuu unkaawwan HTML keessatti bu'a qabeessa, iddoo gatiin dhimmammaa galfame ykn filame gara kaadimaa ramadaman.
Kamshaa Unkaa Too'atamtootaa bani sajoo Sanduuqa Makaa cuqaasitti dirree burqisiisuuf immoo hantuuttee harkisii Walindhaan deetaa Unka keessatti: Masaka - Fuula 3 argamuu qaba.
Gatii dirree kuusaa deetaa keessatti olkaa'uu barbaaddaa?
Filannoowwan lama gaaffii kanaaf ni argaman:
Eeyyee, Dirree kuusaa deetaa asiin gadii keessatti isa olkaa'un barbaada
Amaloota - Too'annoo keessatti dirreen filame akka galfata fuula cancala Deetaa Dirree Deetaajalatti argaman.
Miti, Gatii unkaa keessatti olkaa'u qofa barbaada
Title is: Masakaa Sanduuqa Makaa: Dirree kuusaa deetaa